Iziphumo zokudibanisa ukuPhezulu kokuPhezulu - I-SEO Advice evela kwi-Semalt Expert, uNatalika Khachaturyan
Nje ngokuba iiwebhusayithi ziqhubeka nokwandisa umxholo wazo kubasebenzisi ukuba zijonge kwi-intanethi, ingxaki yokusebenza ngokugqithiseleyo ingangena. Kwixesha elidlulileyo, imiba efana nomxholo ofihliweyo kunye nokugxilongwa kwegama elingundoqo ungenza i-8 iqonga ngeendlela ezingaqhelekanga zokubeka. Kwamanye amaxesha, ezinye i-webmasters zixhomekeke kwimpawu zangaphandle kunye nezothutho ekudluliseni ijusi yokudibanisa kwi-domain yabo. Inkqubo ye-SEO incike kwiinkalo ezininzi ze-page kunye ne-off-page-optimization features, zonke ezijolise ekunyuseni ukubonakala kwewebhusayithi kubaphulaphuli abajoliswe kuyo.
IsiCwangciso seNkqutyana Semalt , uNatalie Khachaturyan, uchaza ukuba ezininzi iindlela zokuthengisa nge-intanethi zingabangela ubungozi obuphezulu bokungaphaya kwe-website. Ngaphezu koko, i-Google iqhuba ukuchithwa kwezinto "zokufakelwa" okanye "ukungaqhelekanga" idibanisa injongo yokunyusa igunya lolawulo kwi-target niche - wholesale bar stools for sale. Uninzi lweeofisi ze-SEO namhlanje ngengqondo malunga nomlando wokudibanisa wesizinda abaya kubandakanya kwisicwangciso sabo sokuthengisa. Ukuze ugweme iziganeko zokuvuselelwa kwekhonkco, ungafunda malunga neentlobo zeekhonkco, ezifanelekileyo zokudlulisa ijusi yekhonkco kunye nomlando wekhonkco kunye neprofayili ye-domain.
Izimpawu zokuqhagamshelana nokuPhezulu kokuPhezulu
I-Google incike kwi-algorithm ukufumana iipatheni ezingaqhelekanga malunga nokuhamba kweemoto..Ngenxa yoko, kulula ukuchonga "indlela engavumelekanga" malunga nokusebenza kwezinye iintanethi ezithile kwi-intanethi. Ngokomzekelo, ezininzi iiwebhusayithi namhlanje ziblogi. Imiba yezixhumanisi ezihambelanayo kunye neembalo zesikhombi zivela kwiimilinganiselo ezilandelelanayo ezilandelayo. Ukusebenza ngokugqithiseleyo njengendawo ephakamileyo yezithuthi kunokwandisa ukukrokrelwa kwewebhusayithi ngokuqhagamshelisa ngokugqithiseleyo. Kwi-crackdown yakutshanje, i-Google inokulahlekelwa ngokukhawuleza ukuthembela kwezinye iinqununu ezibhekiselele kwiisayithi ezinjalo. Kule meko, le mijelo yekhonkco inokungahoywa ukwenza ukuhamba kungenzi inzuzo kumgangatho wakho.
Ngokomzekelo, i-website ingaqala ukufumana isithuthi esicacileyo esivela kwiindawo ezingama-20 ezahlukileyo kwi-niche. Ukususela ekuqwalaselweni okufutshane, ezi website zidibanisa omnye nomnye. La matyala anganikeza isicwangciso sokungqinelana okungavumelekanga kwiinkcukacha zabo zembali kunye neendlela. Ukuphindaphinda kwe-90% kunokubonisa intsingiselo engenza i-website ibonakale igaxekile kakhulu. Kwixesha elidlulileyo, i-arhente ye-SEO e-black box izakuvula iiwebhusayithi ezahlukeneyo ukudibanisa iinkcukacha zabasebenzisi babo okanye iiwebhusayithi zabathengi.
Xa ukwandisa umxholo wewebhusayithi, kubalulekile ukulandela indlela engokwemvelo yokubeka itekisi yesikhombi. Ukubeka iimvume ezininzi kwiimathekisthi kunokunyusa ukusola ukuba kukho ukwabiwa okungavumelekanga kolwazi i-Google encike kuyo yokwenza ii-curves distribution. Izixhumanisi zangaphakathi ezibonakalayo ezibonakala zidibeneyo zinganceda okanye zilimaze inkqubela ye-SEO kwiwebhusayithi.
iiWebhsayithi ezingahambelani nomgaqo-nkqubo wokumisela umgaqo-mgangatho wezomthetho zibeka umngcipheko wokugweba. Kwezinye iimeko, iiwebhusayithi zinokuthi zihlupheke ngokuxinwa ngokukodwa xa zithatha amanqaku amaninzi amanqaku omnyama we-SEO. I-Google icebisa abadali bewebhusayithi ukuba bakhumbule malunga neenkcukacha ezixhumene nabo abafakela kwiiwebhusayithi zabo. Kwamanye amaxesha, iincwadi zesikhombi zingabangela ukuba inkqubo yokuthengisa yedijithali iphumelele. Esi sikhokelo se-SEO sinokukunceda ukuba ufumane iziganeko xa iwebhusayithi yakho inokubandezeleka ngokugqithiseleyo.